Tafatsangana tamin’ny fomba ofisialy ny Federasiona ny Mpanjono Madinika eto Maroantsetra
Tao anatin’ny hafanam-po tanteraka ny nananganan’ny mpanjono madinika ny rafitra federasiona tao anatin’ny distrikan’ny Maroantsetra ny 28 septembre 2012 teo, ka lany tao anatin’ny fifidianana tamin’ny alalan’ny latsabato miafina Andriamatoa PHILIPPE Jean Claude hitarika izany federasiona ny mpanjono madinika izany. Marihina fa nandray anjara tamin’izany fananganana federasiona izany daholo ny fiombonan’ny fikambanan’ny mpanjono madinika na ny “Union des associations” izay efa tafatsangana isaky ny kominina misy ao anatin’ity distrika ity. Niainga tanteraka tamin’ny herin’ny mpanjono madinika avy any ifotony ity fananganana federasiona ity taorian’ny fanentanana sy ny fifandresen-dahatra nataon’ny fikambanana DELC izay miasa amin’iny faritra iny. Ny tanjon’ity federasiona ity dia ny fitandroana ny zon’ny mpanjono madinika sy ho fampandraisana anjara ny tsirairay amin’ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina ho fampandrosoana maharitra ny faritra mano didinan’ny fari-dranomasin’ny “Baie d’Antongil”. Nandritra ity fihaonam-ben’ny mpanjono madinika ity koa moa no nampiratiana ny Sonian’ny
mpanjono madinika izay nahatratra 500 mahery manohitra ny fampiasana ramikaoke (fitaovam-panjonoana manapotika ny zanatrondro) amin’iny faritry baie d’Antongil iny.
Taorian’ity fananganana federasiona ny mpanjono madinika ity dia nisy avy hatrany ny hetsika nataon’ny chef distrikan’ny Maroantsetra nidina tamin’ireo toerana izay malaza mpanao ramikaoka toa an’ny Navana sy Anjahana. Amin’izao fotoana izao dia efa azo heverina fa niato tanteraka ny fampiasana izany ramikaoka (sennes de plage) izany araka ny vaovao azo avy any antoerana.